देशहरुमा तेल उत्पादन लागत। संसारमा तेल को लागत मूल्य
तेल, डलर र सुन बराबर, आर्थिक विनियम सबैभन्दा शक्तिशाली levers को छ। लागि होनहार तेल जम्मा राज्यहरु बीच युद्ध निरन्तर सञ्चालन गर्दै छन्, केही सरकारी एकाइहरु अरूले प्रतिस्थापित छन्। यसको संरचना मा ऊर्जा श्रेणी stranoobrazuyuschih उद्योग पर्छ यो क्षेत्र मा एक सफलता देशको गतिविधिहरु को सबै भन्दा क्षेत्रमा सुरुतिर निम्त्याउँछ रूपमा। यो देश थप "कालो सुन", अर्थव्यवस्था को समृद्धि र विश्व बजार मा एक मजबूत स्थिति को विजय गर्न राज्य लागि तल्लो यसको उत्पादन लागत, महान् मौका निकाल्न सक्षम छ।
देशहरुमा उत्पादन को स्रोत को लागत मूल्य
तेल उत्पादन लागत देश एकदम अलग छ। उदाहरणका लागि, उत्पादन को साउदी अरब इन्धन लागत मा अधिक छैन प्रति बैरल $ 10। रूस मा, यो आंकडा 30 40 डलरसम्म देखि दायरा। केही क्षेत्रहरु 60-70 डलर स्तरमा पुग्छ मा अमेरिका मा महत्त्वपूर्ण छ। क्यानाडा व्यक्तिगत अवस्था छ। तेल बालुवा विकास गर्दा प्रति बैरल 120-150 डलर को आदेश मा खर्च गर्न छ।
चाहे अवस्था आक्रमण संयुक्त राज्य अमेरिका मा "shale क्रान्तिको" राख्दछ?
तेल बजार मा मूल्यहरु र देशहरू द्वारा तेल उत्पादन लागत संग अवस्था, विशेष संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेषज्ञहरु को एक पर्याप्त मात्रामा अनुसार, "shale क्रान्तिको" jeopardizes। को मूल्य भने तेल को एक बैरल निकट भविष्यमा $ 80 को चिन्ह नजिक rises, यो unprofitable उत्पादन हुनेछ। कसैले चाहन्छ आफूलाई को हानि गर्न सञ्चालन। कालो सुन र तेल को विकास मा काम को उच्च लागत को कम लागत बाटो खुल्छ विश्व बजार जस्तै भारत र चीन रूपमा देशहरूको। एक ऊर्जा लागत रूस रूपमा $ 30, एक प्रमुख खेलाडी, एक मान खस्छ भने बजार बाहिर बाध्य हुनेछन्। मात्र तरिका बाहिर - डलर सन्दर्भ बिना आफ्नै मुद्रा मा तेल देशहरूको कार्यान्वयन को शुरुवात हो।
सिक्का को विपरीत पक्ष देशहरूमा द्वारा voiced तेल उत्पादन को सार्वजनिक लागत वास्तविक छैन भन्ने छ। नयाँ खनिज जम्मा को व्यवस्थित विकास, सुधार र यसको उत्पादन प्रविधिको लागत कम गर्छ। धेरै देशहरूमा संसारको तेल मूल्यहरु मा गिरावट देखि धेरै उच्च भार सामना गर्न सक्छन्।
देशहरूमा द्वारा तेल को एक बैरल तालिका विकास लागत
हामीलाई संसारमा उत्पादन देशहरूमा प्रत्येक तेल लागत एक बैरल को तालिका अध्ययन गरौं।
देश लागत मूल्य अमेरिकी डलरमा कच्चा तेल को एक बैरल को।
अमेरिकामा Shale तेल 32
brownfields मा रूस 28
मेक्सिको को खाडी मा अमेरिकी तेल उत्पादन मा 25
नर्वे, उत्तर समुद्रमा विकास 17
क्यानाडा मा तेल अस्फाल्ट 16
रूसी, केवल नयाँ जम्मा 16
मेक्सिको, भेनेजुएला, bituminous तेल खानी 9
रूस, सबैभन्दा होनहार परियोजनाहरू 6
साउदी अरब 4
तालिका देखि यो साउदी अरब छ जस्तै सबै अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार भरोसा महसुस भनेर स्पष्ट छ। र त्यो एउटा उत्सुक ठाडै तेल उत्पादन को मात्रा कम गर्न इन्कार जो, OPEC मा सहभागी हुन्छ। धेरै राज्य को हरर तिर जान्छ मूल्यहरु मा गिरावट, यो डरलाग्दो छ। धेरै विश्लेषकहरूले यस्तो व्यवहार बस यसको मुख्य प्रतियोगिहरु को वैश्विक रंगशालामा देखि देश oust गर्न चाहन्छ कि मान।
तालिका राज्य कोषको कर बिना तेल को एक बैरल को लागत देखाउँछ कि डाटा देखाउँछ, र उत्पादन शुल्क कर्तव्य, अन्य सानातिना खर्च लागत बिना। यहाँ रूस मा तेल को मूल्य को कर को 55% द्वारा गठन गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई मा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्भव छ। अमेरिका, गतिविधिको यो क्षेत्र लगभग फलस्वरूप, निजी कम्पनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा विकास र उत्कृष्ट उत्पादन अवस्था लागि उत्कृष्ट संभावनाहरु छन् taxed छैन र। राज्य बाट समर्थन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
अमेरिकामा तेल को लागत विवरण
U.S. मा तेल को लागत एकदम आधारमा अलग स्थान र प्रयोग विशिष्ट पुस्ता उत्पादन प्रविधि मा। यसरी, 2012 मा प्रमुख अमेरिकी खानी कम्पनीहरु shale तेल उत्पादन को प्रयोग प्रविधी मा बारेमा $ 100 खर्च गरेका छन्। 2015 मा, यो आंकडा वरिपरि 30 डलर उभिरहेका थिए। निजी तेल कम्पनीहरु को प्रतिनिधिहरु informally तेल उत्पादन प्रविधि मा क्रमबद्घ र दीर्घकालीन सुधार धन्यवाद, तिनीहरूले प्रति बैरल $ 22 को आंकडा पुग्न व्यवस्थित भन्छन्। सक्रिय तेल उत्पादन कारखाना को मर्मतका आधा कम लागत। संयुक्त राज्य अमेरिका मा तेल को एक बैरल को लागत, सम्भव छैन ठ्याक्कै पत्ता लगाउनुहोस्। सबै तेल बजार मा स्थिति को विकास संग, समय स्पष्ट हुनेछ।
अमेरिकी लागि संभावनाहरु के के हुन्?
अमेरिका मा तेल को एक बैरल को उत्पादन लागत आँकलन, ठ्याक्कै विश्व बजार मूल्य ईंन्धन को उत्पादन को सूचकांक राज्य लागि unprofitable हुनेछ के, कि बारे सोच धेरै विशेषज्ञहरु रोक्न छैन। तथ्याङ्क अनुसार, सबै भन्दा ठूलो एजेन्सीहरू को एक, क्षण उत्पादन तेल मात्र 4% लाभकारी परे छन्। मा ठूलो जम्मा उत्तर डेकोटा सफलतापूर्वक कार्य र आज विकास गर्न जारी छन्। साथै, निरन्तर नयाँ क्षेत्रहरू र सम्भावित जम्मा एक मूल्यांकन खोज्नुभयो भइरहेको। संयुक्त राज्य अमेरिका को सबै भन्दा उत्पादक क्षेत्र - तेल को एक बैरल को लागत 28 $ माथि rises जहाँ म्याकेनजिइ जिल्ला छ। अमेरिकी नीति मा ठूलो प्रभाव इन्धन को एक रणनीतिक आरक्षित छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, मिति गर्न, यो अर्को तीन वर्षसम्म राज्य को सबै आवश्यकता प्रदान गर्न पर्याप्त छ।
रूस मा तेल उत्पादन लागत जो छ?
रूस मा तेल को लागत मात्र होइन यसको उत्पादन को विशिष्टता द्वारा गठन गरिएको छ, यो सबै भन्दा सँगैको लागत जायज। राजस्व सम्पूर्ण रकम मनपरी हुन सक्छ Rosneft अंक 100% निर्दिष्ट। मा राज्य उत्पादन शुल्क कर भुक्तानी, severance कर र भन्सार कर्तव्य मा कटौती आम्दानी को नै समय 55%। कुल आय को 10% को मा प्रारम्भिक अनुसन्धान क्षेत्रहरू, तेल ड्रिलिंग उपकरण स्थापना मा खर्च छ, ग्राहकहरु लागि खोज र तिनीहरूलाई संग अनुबंध को निष्कर्ष। Rosneft (मिसिन, भवन, उपकरण, रिसाव, आदि) को सबै स्रोतहरू को परिशोधन लागि ग्राहकहरु यसलाई ढुवानीको एक बैरल को लागत को 8.4% र 7.6% को कुल खर्च गर्न थप गर्नुहोस्। कम्पनी, ऊर्जा उत्पादन गर्न साथै, यो अझै पनि किन्छ र तेस्रो-पक्ष कम्पनीहरु देखि, यो राजस्व कम्तिमा 8.6% को प्रक्रिया को लागि दिन्छिन्। को "कालो सुन" को कार्यान्वयन पछि शुद्ध लाभ 10% भन्दा कम छ।
रूस मा तेल को मूल्य, साधारण स्वीकार आंकडा बावजुद धेरै 12 25 डलर देखि लिएर। खातामा भूमि पट्टा वा यसको प्रयोग गर्ने अधिकार खरिद लागत लिने, इन्धन को सर्वोत्कृष्ट निकासी लागि पूर्वाधार निर्माणको लागत, संख्या प्रति बैरल $ 70, अमेरिका भन्दा ठूलो परिमाण को आदेश छ को दायरामा प्राप्त।
OPEC देशहरूमा किन तेल सामग्री र कम मूल्यहरु कम छैन?
साउदी अरब मा तेल को लागत संसारमा सबै भन्दा कम छ। यसलाई45 डलर देखि दायरामा फरक हुन्छ। यो अवस्थामा विश्व बजार मूल्यहरु महत्वपूर्ण drawdown सामना गर्न अनुमति दिन्छ। जेनेरेसन ऊर्जा स्रोत कम गर्न इन्कार "कालो सुन" को लागत मा ड्रप गर्न नेतृत्व गरेको छ। यस्तो निर्णय तथ्यलाई कि छैन मात्र साउदी अरब द्वारा जायज छ तर पनि सबै OPEC देशहरूमा तेल उद्योग मा पूर्ण निर्भर छन्। इन्धन उत्पादन निर्भर गर्दैन मात्र राज्य - जहाँ लाभ उत्पन्न भएको छ पर्यटन उद्योग, ग्याँस उद्योग र sawmill इन्डोनेशिया, छ। तेल धन्यवाद बच्न एक ठूलो वा कम हदसम्म अन्य सबै OPEC सदस्य,। आफ्नो स्तर आधारमा दायरा 48 देखि 97%। यसैले निष्कर्ष: दिइएको समुदाय सहभागी विभिन्न देशहरूमा कम लागत तेल, तिनीहरूले विश्व बजार मा स्थिति ग्रस्त छैन। उत्पादन को मात्रा कम, तिनीहरूले आफ्नै अर्थव्यवस्था मा थिच्नुहोस्। ईंन्धन को अधिक उत्पादन, राम्रो देश नै र आफ्नो मान्छे: निर्णय उल्टो मा छन्।
तेल लागि माग बढ्दै छ, र तेल को मूल्य पतन किन?
पछिल्लो केही वर्ष मा, तेल लागि दुनिया माग धेरै पटक बढेको छ। यो चीन र भारत को विकास द्वारा facilitated थियो। माग उच्च दर मिड-गर्मी 2014 मा तेल को मूल्य $ 117 मा peaked भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेका छन्। प्रति बैरल शरद ऋतु मूल्य को बीचमा एक तथ्याङ्क बन्न थिएन, स्थिति $ 60 उतर। यो "काले सुन" यो थियो र लोकप्रिय रहनेछ। एक रोचक तथ्य इन्धन मूल्यहरु मा गिरावट स्पष्ट आर्थिक कारण जायज छैन भन्ने छ, राज्य आफ्नो आवश्यकता बढ्न, विकास गर्न जारी छ। मात्र चीन मा गत वर्ष भन्दा यो लगभग 30 लाख वाहन जारी गरिएको छ। अर्को रोचक तथ्य तेल को लागत लगभग देश परिवर्तन छैन भन्ने छ।
आपूर्ति outstripped माग वृद्धि मा वृद्धि
तेल बजार मा ब्याज हुर्किसकेका छ भएकोले झर्ने मूल्यहरु को कारण, सबै भन्दा संभावना छ, skaknuvshy माग बढ्यो कि प्रस्ताव को मात्रा मा वृद्धि भएको थियो। साउदी अरब र संयुक्त राज्य अमेरिका मा ऊर्जा स्रोत निकासी गतिविधि बढ्छ को दर। तेल को लागत को गठन एउटा चिन्ह राजनीतिक अवस्था र रूस र युक्रेन बीच द्वन्द्व imposes। इतिहास संसारको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मा geopolitics मा कुनै पनि परिवर्तन ऊर्जा मूल्यहरु मा वृद्धि गर्न नेतृत्व भन्ने देखाउँछ।
विश्व तेल उत्पादन लागत मा गिरावट - कुनै अतिरिक्त आय
तेल उत्पादन प्रविधिको आधुनिकीकरण इन्धन लागत मा एक कमी गर्न नेतृत्व गरेको छ। विचार राज्य निर्यात स्थिति बाट राम्रो मुनाफा fuck थियो भन्ने छ। सबै आशा गर्न यसको विपरीत, विश्व बजार मा इन्धन मूल्य संकुचन। यस क्षेत्रको विकास र तेल विकास को लागत कम घाटा नेतृत्व गरेका छन्। यो कारण धेरै छन्:
अन्तर्राष्ट्रिय बजार यसको इन्धन को शेयर वृद्धि इराक विरुद्ध प्रतिबंध को उठाने।
लिबिया को बहाली र यसको तेल उद्योग।
कम मूल्यहरु मा तेल को smuggling अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रसव।
(बालुवा र भारी मा shale,) अपरंपरागत तेल उत्पादन मा वृद्धि।
तेल उत्पादन को लाभकारी सीमित
मूल्य मा गिरावट अनिश्चितकालीन गर्न सकिँदैन। बजार मा इन्धन लागत गर्न लगभग बराबर हुनेछ तेल को लागत को दुनिया मा एक पटक, यो एक बारी आशा गर्न सम्भव छ। यहाँ प्रत्येक राज्य यसको आफ्नै निश्चित मूल्य इन्धन उत्पादन छ भन्ने तथ्यलाई काम गर्दछ। मूल्य परिवर्तन तेल उत्पादन को राज्य राजस्व र लाभकारी मा एक ग्लोबल प्रभाव छ। वास्तवमा, कम इन्धन उत्पादन खाडी अमेरिका मा खर्च गर्न संभावना। यो जीवाश्म को सानो गहिराई र अन्त उपभोक्ता गर्न इन्धन को विकास को क्षेत्र को करीब निकटता कारण हो। निर्माण र मर्मतका को लागत न्यूनतम प्रविधिहरू छन्। को उच्चतम लागत संसारमा तेल उत्पादन अमेरिका, यो shale संसाधन विशेष काम गर्दछ। तिनीहरूले उत्पादन गर्न धेरै कठिन र आर्थिक कठिन छन्। एक प्रविधि बाट उहाँले वस्तुतः सम्पूर्ण विश्व इन्कार गरे। विश्लेषकहरूले अनुसार, एक इन्धन जस्तै को लाभकारी एक बैरल को विश्व बजार मूल्य तल $ 75 पतन हुनेछ भने स्तर मा रहनेछ। वास्तवमा स्थिति फरक छ: मूल्यहरु $ 50 मा आंकडा भन्दा गएका छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद, अमेरिका खनिज जम्मा को सक्रिय विकास जारी छ।
रूस मा तेल को लागत अमेरिका भन्दा धेरै कम छ। यद्यपि, अमेरिकी, आधुनिक संसारमा राजनीतिक द्वन्द्व सीधा लिङ्क विशेषज्ञहरु इन्धन को उत्पादन वृद्धि गर्न जारी छ। यसरी, अक्टोबर 2014 मा इन्धन उत्पादन को मात्रा 8.9 मिलियन व्यारेल, त्यसपछि 2015 यसलाई 9.4 मिलियन वृद्धि गर्न योजना छ थियो। यो संसारको तेल बजार, आर्थिक कारक मा स्थिति, यो पूर्ण अनुपस्थित समय निर्धारण undercurrents।
रूस सुन रिजर्व - स्थिरीकरण को एक उपकरण र स्वतन्त्रता को ग्यारेन्टी
जनसंख्याको जीवन को मामला मा मूल्यांकन रूसी शहर
क्लस्टर विश्लेषण। जटिल घटना को अध्ययन मा वैज्ञानिक दृष्टिकोण
शहरी ढेर - सबै भन्दा ठूलो महानगरीय क्षेत्रहरु छ ...
उत्पादन उत्पादनको उत्पादन हो
Nettles: प्रयोग र उपयोगी गुणहरू लागि contraindications
आइपड टच - यो के हो?
नासपाती सम्मेलन: विविधता को वर्णन, विशेष गरी हेरविचार र समीक्षा
मुला कालो। उपयोगी गुणहरू